Akwa Hotels nke America N’oge Ọlaedo nke Foto Post Card
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Industrylọ Ọrụ Ọbịa » Akwa Hotels nke America N’oge Ọlaedo nke Foto Post Card
Na-agbasa News Travel • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Na February 2000, e nwere ihe ngosi pụrụ iche na Metropolitan Museum of Art na New York: “Walker Evans na Foto Postcard.” Evans bụ titan nke foto narị afọ nke 20 nke gosipụtara ihe ọkụkụ dara ada; sharecropper ezinụlọ, na ọkpụkpụ-akọrọ Southern ugbo n'oge Iduọ Ndutịm Uforo, grimy ụlọ mmepụta ihe na North; na ọdịdị ihu nke ndị njem ụgbọ oloko New York.
Evans chịkọtara mpempe akwụkwọ eserese na ndụ ya niile n'oge afọ ọla edo site na 1900 ruo 1920s.
Ihe ngbaghara a sitere na mkpebi nzipu ozi nke United States na 1907 na akụkụ oghere nke akwụkwọ ozi nwere ike ịgụnye adreesị nke onye nnata na ozi.
N'otu oge ahụ, Post Office tinyere ego stampụ 1 on na postkaadị ndị a.
Ihe ọzọ bara uru bụ na ọnụahịa nke ihe agba agba agba agba nke nyere akwụkwọ ozi dị ka onyogho aka na-acha anụnụ anụnụ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na acha uhie uhie.
N’oge a, ụdị akwụkwọ ozi dị iche iche gụnyere họtelụ, ebe ezumike nke oge ọkọchị, ọdụ ụgbọ oloko, ụgbọ ala, ebe a na-aga ije, nnukwu okporo ámá ndị dị n’obodo nta, okpukperechi steeti, ụlọ ọrụ, ọrụ, na ọtụtụ isiokwu. Ndị ụlọ ọrụ abụọ mepụtara ihe kacha mma n'ime kaadị ụlọ nkwari akụ ndị a: Curt Teich & Company, Inc., Chicago na Tichnor Brothers Inc., Boston abụọ mechiri na 1970s. A na-eme atụmatụ na Curt Teich & Company bipụtara ụfọdụ echiche dị iche iche 400,000 nke United States, Canada na họtel esenidụt n'ime afọ iri asaa na asaa.
Ichmụnna Tichnor wepụtara akwụkwọ ozi họtelụ 25,000 ọkachasị na steeti niile. A rundown nke Ọmarịcha họtel ndị America n'oge Golden Age nke foto ahụ na-egosi na Barry Zaid "Na-achọ Ka Were Nọ Ebe A: A Njem nke America Hotels Ukwu N'oge Golden Age nke Foto dị na Kaadị Kaadị Publishers, Inc. (New York 1990).
“Ma na kaadị, niile hotels nọ ha praịm, Nke a bụ njem gafee America na anyị ka nwere ike na-. Anyị nwere ike iche na nke ahụ bụ anyị na-egwu mmiri n'ihu Marlborough - Blenheim na Atlantic City's gold, sandy beach ma ọ bụ na-agagharị na ebube cactus ubi nke Phoenix's Camelback Inn ma ọ bụ na-enwe echiche nke ugwu site na windo dị elu nke Prince of Wales Hotel na Canada’s Waterton Lakes National Park. Nke a ọ bụghị tebụl anyị dị na ụlọ iri nri nke osisi, n'akụkụ mmiri na-asọ asọ nke na-agafe n'ụlọ obibi dị na Brookdale, California? Nke a bụ akụkọ ọdịnala, akụkọ banyere ndụ ndị njem n'oge gara aga. ”
Ọ dabara nke ọma, a na-echekwa ọtụtụ ụlọ oriri na ọ classicụ classicụ kpochapụwo na kaadi akwụkwọ ozi ndị a pụrụ iche na akwụkwọ "ish Chọrọ Ebe A". Ndị a bụ ndị kacha mma n’ime ha: